Evra oo ku ruxay qalbiyada jamaahiirta Man United fariintan uu la wadaagay Rio Ferdinand – Gool FM
Evra oo ku ruxay qalbiyada jamaahiirta Man United fariintan uu la wadaagay Rio Ferdinand
Kaafi November 8, 2016
(Manchester) 08 Nof 2016. Patrice Evra waxa uu fariin qalbi ruxid leh ugu diray Instagram-ka Rio Ferdinand oo ay hore uga wada tirsanaayeen Manchester United – Rio waxa uu u dabaal degeyey dhalashadiisa.
Laacibka u dhashay France waxa uu ka soo garan dheelay xiddigii hore ee West Ham iyo Leeds waayihii Sir Alex Ferguson.
Labadaba waxaa loo aqoonsan yahay halyeyo kooxda ah iyaga oo ku wada guuleystay Premier League, League iyo Champions League.
JOYEUX ANNIVERSAIRE bro!!!! I respect you so much and I am really proud of you in all that you have achieved on and off the pitch !!!despite the difficult times you have faced! I love this game ahahahahah #manchesterunited @rioferdy5
A photo posted by Patrice Evra (@patrice.evra) on Nov 7, 2016 at 12:37pm PST
Walo ay labaduba hada joogin, waxa ay aad caan uga yihiin dhinaca jamaahiirta United.
Hada, qoraalka uu baraha bulshada soo dhigay wey uun sii xoojin doontaa caannimadaas.
Evra waxa uu soo dhigay sawir ay wada dabaal degeyaan isaga oo soo raaciyey qoraalkan: ‘JOYEUX ANNIVERSAIRE bro!!!!
‘Aad ayaan kuu qadariyaa waxaana aad ayaana ugu faanaa wax walba oo aad ku guuleysatay gudaha iyo dibada gegida!!!!!!
‘Marka laga yimaadi dhibaatada aad wajahday!
‘Waan jeclahay dheesha hahahahaha’.
Dhalasho wacan, Rio.
Gabriel: Juhdi weyn ayaan ku bixinnay si aan u celino Lionel Messi
Waa kee horyaalka goolasha ugu badan ololahan laga dhaliyey?